Nhau - OIS uye EIS ye zoom block kamera
IP Zoom Kamera Module
4K Zoom Ma module
4MP Zoom Modules
2MP Zoom Ma module
Dhijitari Block Kamera Mamodule
Drone Zoom Kamera Module
Thermal Kamera Module
1280 Thermal Ma module
640 Thermal Ma module
384 Thermal Ma module
Drone Gimbal Makamera
Bi-Spectrum Positioning Maitiro
Dome PTZ Makamera
OIS uye EIS ye zoom block kamera
Kudzikiswa kwedhijitari chiitiko makamera akura, asi kwete muCCTV kamera lens.
Pane nzira mbiri dzakasiyana dzekudzora iyo shaky-cam mhedzisiro.
Optical mufananidzo kudzikamisa shandisa dzakaomarara Hardware michina mukati me lens kuti uchengetedze iwo mufananidzo wakadzikama uye kugonesa unopinza kubatwa. Zvave zviripo kwenguva yakareba mumutengi zvemagetsi, asi hazvina kugamuchirwa zvakanyanya muCCTV lens.
Kugadzikana kwemufananidzo wemagetsi kuri kwakawanda kwekunyengedza kwesoftware, uchinyatso sarudza chikamu chakaringana chemufananidzo pane sensor kuita kuti iite senge iri nyaya uye kamera iri kufamba zvishoma.
Ngatitarisei kuti ese ari maviri anoshanda sei, uye kuti ari kushandiswa sei muCCTV.
Optical Image Kudzikama
Optical mufananidzo kudzikamiswa, unonzi OIS kupfupika, kunoenderana neiyo optical stabilization lens, ine otomatiki control PID algorithm.
Ikamera yekamera ine optical image kugadzikana ine mota yemukati inokwenenzvera muviri kana chimwe chezvinhu zvegirazi mukati me lens sekufamba kwekamera. Izvi zvinoguma nekusimudzira, kupokana nekufamba kweiyo lens uye kamera (kubva pakubvunda kwemaoko eanoshanda kana mhedzisiro yemhepo, semuenzaniso) uye ichibvumira iyo inopinza, isina-yakajeka mufananidzo kuti inyorwe.
Kamera ine lens ine optical mufananidzo kudzikiswa inogona kutora yakajeka mifananidzo ichiri pazasi mwenje nhanho pane imwe isina.
Chinhu chikuru chakadzikira ndechekuti kugadzikana kwemufananidzo wekusimbisa kunoda zvimwe zvekuwedzera mune lens, uye OIS-akashongedzerwa makamera uye lenzi zvinodhura zvakanyanya kupfuura zvigadzirwa zvakaomarara.
Neichi chikonzero, OIS haina kukura mukushanda muCCTV zoom block kamera.
Yemagetsi Mifananidzo Kudzikama
Yemagetsi Mifananidzo Kudzikamisa inogara ichinzi EIS kwenguva pfupi. EIS inonyanya kuzivikanwa nesoftware, haina chekuita ne lens.
Kugadzikisa vhidhiyo isingazungunuke, kamera inogona kuburitsa zvikamu izvo zvisingatarisi zvichifamba pane imwe furemu uye zoom yemagetsi munzvimbo yezvirimwa. Goho repepa rimwe nerimwe remufananidzo rinogadziridzwa kuti ribhadhare kuzunza, uye iwe unoona track ishe yevhidhiyo.
Pane nzira mbiri dzekuona zvikamu zvinofamba. Imwe inoshandisa g-sensor, imwe yacho inoshandisa software-chete kuona mifananidzo.
Paunowedzera kuswededza mukati, kudzikisira hunhu hwevhidhiyo yekupedzisira huchave.
MuCCTV kamera, nzira mbiri idzi hadzina kunyanya kunaka nekuda kwechero zviwanikwa senge furemu chiyero kana kugadzirisa kweye-chip system. Saka, kana iwe ukavhura EIS, zvinongoshanda chete kune yakaderera kudedera.
Isu taburitsa Optical stabilization zoom block kamera, Bata sales@viewsheen.com kuti uwane ruzivo.
Post nguva: Dec-22-2020